DHAGEYSO:- Jeesow oo ka sheekeeyay sheeko dhex-martay isaga iyo Saalax Bad-baado – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DHAGEYSO:- Jeesow oo ka sheekeeyay sheeko dhex-martay isaga iyo Saalax Bad-baado
Xildhibaan Daahir Aamiin Jeesow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlay mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho ayaa si aan caadi ahayn uga sheekeeyay wixii dhex maray isaga iyo Saalax Nuux Ismaaciil (Saalax Bad-baado) oo maalmo ka hor isku qarxiyay bar-koontrool ah ee laga galo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Jeesow ayaa sheegay in muddo lix bilood kahor isagoo la socdo xildhibaan Goodir uu Saalax Bad-baado weerar kusoo qaaday, xilli ay ku sugnaayeen gobolka Hiiraan gaar ahaan meel u dhaw deegaanka Ceel-Cali, wuxuuna Jeesow tilmaamay in Saalax Bad-baado uu doonayay inuu dilo balse ay ka bad-baadeen.
“Saalax Bad-baado wuxuu rabay inuu na-dilo balse waan ka bad-baadnay, wuxuu ahaa ninki hogaaminayay dagaalkii Ceel-Cali ka dhacay, dagaalka markii uu dhamaaday ayuu i soo wacay wuxuuna igu yiri:- (Maanta waad iga bad-baaday murtad Jeesow laakiin maalin kale ayaadan iga bad-baadi doonin).” Sidaasi waxaa yiri Daahir Jeesow oo wareeysi siiyay mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho.
Dhinaca kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow ayaa sheegay inuu aqoon fiican u leeyahay Saalax Bad-baado oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii KMG ahaa islamarkaana ay xilligaasi kasoo wada shaqeeyeen dowladihii KMG ahayd ee Soomaaliya.